Khabar Break - एमालेले २५ जिल्लामा उम्मेदवार तय गर्‍यो, कसले कहाँबाट पाउने भए टिकट ?
एमालेले २५ जिल्लामा उम्मेदवार तय गर्‍यो, कसले कहाँबाट पाउने भए टिकट ?
काठमाडौं, कात्तिक ४ – नेकपा एमालेले आउँदो मंसिरमा हुने प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा चुनावका लागि उम्मेदवार तय गरेको छ । माओवादी केन्द्रसँग सिट बाँडफाँडको सहमतिपछि आफूले पाएका सिटमा एमालेले उम्मेदवार तय गरेको हो ।
एमालेको स्थायी कमिटिको बैठकले प्युठान र बाग्लुङमा राष्ट्रिय जनमोर्चासँग तालमेल गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । यस्तै बाग्लुङमा राष्ट्रिय जनमोर्चासँग र सिन्धुपाल्चोकमा माओवादी केन्द्रसँग थप परामर्श गरेपछि उम्मेदवार घोषणा गर्ने पनि एमालेले निर्णय गरेको छ ।
एमालेले प्रस्तावित नाममा आवश्यकताअनुसार परिवर्तन गर्न सक्ने पनि जनाएको छ । एमालले आफूले सिट पाएका २५ जिल्लामा उम्मेदवार तय गरेको हो ।
कसले कहाँबाट पाउने भए टिकट ?
प्रदेशसभा १–वीरबहादुर ठगुन्ना
प्रदेशसभा–१ बलदेव रेग्मी
प्रदेशसभा–२ प्रकाश शाह
प्रदेशसभा २–लीलाधर भट्ट
प्रदेशसभा–१ नन्दसिंह बुढा
प्रदेशसभा–२ पदमबहादुर रोकाया
प्रदेशसभा–१ कुर्मराज शाही
प्रदेशसभा–१ नीरज आचार्य
प्रतिनिधिसभा–प्रेमप्रसाद तुलाचन÷महेन्द्र थकाली
प्रदेशसभा–१ इन्द्रधारा बिष्ट
प्रदेशसभा– २ प्रेमप्रसाद तुलाचन÷महेन्द्रबहादुर थकाली
प्रतिनिधिसभा–पोल्देन छोपाङ गुरुङ
प्रदेशसभा–२ खण्डा लामा गुरुङ
प्रदेशसभा–१ दोर्जे डण्डुल गुरुङ
प्रदेशसभा–२ नरदेवी पुन
प्रदेशसभा–१ धनञ्जय दवाडी
प्रदेशसभा २–पृथ्वीसुब्बा गुरुङ
प्रदेशसभा १ को २–रामशरण बस्नेत
प्रतिनिधिसभा–१ जनार्दन ढकाल
प्रदेशसभा–१ कन्र्याल तामाङ
प्रतिनिधिसभा १ र (प्रदेशसभा–२): वद्री मैनाली
प्रतिनिधिसभा २–नारायणप्रसाद खतिवडा
प्रदेशसभा–१ केशव पाण्डे
प्रतिनिधिसभा–१ भूमि त्रिपाठी
प्रदेशसभा–१ राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे
प्रतिनिधिसभा–२ खेम लोहनी
प्रतिनिधिसभा–वसन्त कुमार नेम्बाङ
प्रदेशसभा–१ गणेशकुमार काम्बाङ
प्रदेशसभा १–बलबहादुर साम्सोहाङ
प्रदेशसभा १ः राजेन्द्रकुमार राई
प्रदेशसभा २ः शेरधन राई
प्रदेशसभा १ः अमिरबहादुर गुरुङ
प्रदेशसभा १–मानवीर राई
प्रदेशसभा २–वुद्धिकुमार राजभण्डारी
प्रदेशसभा १ः राजन राई
प्रदेशसभा १–शान्तिप्रसाद पौडेल
प्रदेशसभा २–कैलाश ढुङ्गेल
राप्रपाको उम्मेदवारी नै त्यागेर माओवादीमा प्रवेश